Niharan-doza ny fiara nitondra ny filoham-pirenen’i Comores, Azali Assoumani, manatanteraka fitsidihana ao Anjouan. Nilaozan’ny hisatra teny ampandehanana ilay fiara, ka hany nataon’ny mpamily dia ny nampidofotra azy tamin’ny andrinjiro nampijanonana ilay fiara raitra. Na teo aza ny loza dia nanohy ny fitsidihana tanterahiny ao Anjouan hatrany ny filoha Azali. Misokatra kosa ny fanadihadihana mikasika ity loza nanjo ny fiara nitondra azy ity. Hasomparana ? olana ara-mekanika ? Lesoka amin’ny fikojakojana ? … Santionany amin’ny fanontaniana mipetraka ireo manoloana ity loza ity, fiara raitra rahateo no niharan-doza.
Nitaraina ireo mpitondra kamiao, mitatitra entana, noho ny sakana teo Ankadinondry Sakay amin’ny lalam-pirenena RN1, tsy namelana azy ireo hitatitra vokatry ny tany hiazo an’Antananarivo. Nanazava Ranarivelo Fanomezantsoa Lucien, minisitry ny fambolena sy fiompiana ary jono niainga avy eny amin’ny Foibem-pibaikoana momba ny coronavirus, eny Ivato, ny antoandron’ity alarobia 25 marsa 2020 ity fa afaka mandeha ny fiara mitatitra ireo entana ilain’ny mponina, fa ny olona kosa tsy maintsy manaja ny fepetra noho ny hamehana ara-pahasalamana mihatra eto amin’ny tanin’ny Repoblikan’i Madagasikara, anisany ny fakana hafanan’ny vatana ary ny fanajana ny bokinandraikitra mifehy ny fiara vaventy. (Jereo Sary Tohiny)
174 ny fitiliana vita hatry ny omaly 24 marsa 2020 sy ny mitatao vovonana teo. 19 ireo olona voamarina fa mitondra ny tsimokaretina coronavirus hatramin'ny zoma 20 marsa 2020, tsy nahitana soritraretina ny 18 tamin’ireo, iray ihany no narary saingy efa mihatsara ny fahasalamany amin’izao. Tsy nisy fiovana ireo tarehimarika ireo tao anatin’ny 24 ora farany, araka ny fampitam-baovao nataon’ny mpitondratenin’ny Foibe fibaikoana momba ny Coronavirus, Pr Vololontiana Hanta Marie Danielle androany tamin’ny 1ora teo. (Jereo Sary Tohiny)
Misy sahady ireo olona nitady hisoloky ho mpiasan'ny fahasalamana ary miaraka amin'ny fiara mihitsy izy ireo milaza fa isan'ny ireo dokotera mizaha manokana ny resaka "Coronavirus" mitety –tokantrano, araka ny fampitam-baovao nataon’ny avy eo amin’ny Polisim-pirenena. Ny fiara avy any amin'ny C.C.O (Centre de Commandement Opérationnel) ihany no afaka manao izany izay ahitana mpiasan'ny fahasalamana sy mpitandro ny filaminana ao anatiny, hoy ny Polisim-pirenena. Mampahafantatra ireto farany fa « miantso ary mampandre mialoha ilay olona hozahana fahasalamana ny ekipa CCO-COVID-19 vao tonga eny an-toerana ». Manentana ny Vahoaka ny Polisim-pirenena « mba hiantso ny mpitandro filaminana akaiky azy indrindra raha sendra ny tranga mifanohitra amin'ireo voalaza etsy ambony ireo ». (Jereo Sary Tohiny)